» अरुण चाम्लिङको प्रेमभाव
अरुण चाम्लिङको प्रेमभाव
२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०७:१३
जिवनमा हामी सधैँ मायाको कुरा अनि माया कै सपना देख्छौँ । तर, हामी सधैँ त्यो सपना र चाहनाहरुलाई पुरा गर्न सक्दैनौँ । हजुर, यथार्थ शुन्यतामा हराएर व्यूझिन जति गाह्रो अरु के नै हुँदो रहेछ र ? सायद, सायद, त्यसैले त होला शुन्यतामा हराएर पनि उत्तिकै मायाको आभासमा साहरा र मायाको भिख मागिरहेका हुन्छौँ, खोजिरहेका हुन्छौँ । साँचिकै मानिसको जिवनमा अनेकौ भावनाहरु पलाएर आउँदो रहेछ , जति मन भित्र निहित मायाको श्रृङ्खलाहरु आयाम हुन्छन नि ? उत्तिकै सम्झनाहरु पनि आईरहदो रहेछ पल–पल । म कल्पना पनि गर्न सकिरहेको छैन ।
वाहनामा हात यहाँ, समाउँछन मान्छेहरु
अरुलाई रुवाएर, रमाउँछन मान्छेहरु
मलाई माफ गरि देउ है, मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेँ । प्रेम गरेँ, दुई मुटुलाई जोड्ने महापाप सोचेँ । म जस्तो पापी मान्छे सायद, यो सँसारमा कोही छैन । त्यसैले एस, म जस्तोलाई सजाएर मुटुमा राख्ने कल्पना पनि नगर्नु है । मलाई थाहा छ एस, तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ र प्रेम पनि गरेका थियौ । मात्र मसँग । प्रिय एस, तिमी मलाई माफ गरिदेउ ल, मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ, तिम्रो चोखो प्रेमलाई हाँसोमा उडाएँ । प्रिय एस,मैले तिमीलाई पाउनु भन्दा अगाडी नै कसैलाई पाई सकेको थिएँ नि त । र उसलाई नै मैले माया गर्नु पर्छ साथ दिनु पर्छ । किन कि उनी मेरो श्रीमती भईसकेकी छिन् । र एस, अब मैले तिमीलाई माया गर्ने अधिकार म मा रहनु पनि त हुँदैन । तर एस, यो कसुर मैले जति गरे त्यो तिमीलाई अनन्त अनन्त सम्म तितो क्षण भई रहने छ ।
हो एस, त्यसैले आज तिमीलाई भन्न नसकेर लाखौँ श्रोताहरुको प्रिय कार्यक्रम ‘मुटु देखि मुटु सम्म’ चन्द्र दाजुको मिठो आवाजलाई साक्षी राखी तिम्रो समिप मायाको सौम्य छाड्दै म तिमी बाट सदाको लागि ताढा रहन यो वरण गरेँ । अठोट गरेँ । प्लिज एस, मलाई बुझ्ने कोशिस गर ल । जब,म तिमीसँग नजिक हुन्छु, पटक–पटक कुरा गर्छु । झन–झन मलाई तिम्रो मायाले सताई रहन्छ । त्यसैले एस, म बाट भुल भए पनि मेरो बाध्यता र निष्कलङ्कहरुलाई तिमीले बुझ्ने कोशिस गर्नेछौ । जिवन लामो छ धैरै जिउनु पर्छ सँघर्ष गर्नु पर्छ, मनमा निडर राखेर सम्मुख बढ्नु तिमीलाई मिठो मायाको साथ सफलता मिल्नेछ । बस्, अरु त धेरै के भनु र खै ?
प्रिय एस, यदि तिमीले यो मेरो भावनालाई बुझेर मलाई माफ गरी दिन्छौ भने मात्र मेरो मनले पनि शान्ति पाउने छ । मेरोतर्फ बाट तिमीलाई नयाँ पल साथै, नयाँ जिवनको लाखौँ लाख शुभकामना ।
मुटु दुख्छ अन्ययासै किन ?
मृत्यु अँगाल्न सक्दिन
माया गर्छु आफुलाई भन्दा धेरै
तर,सँगै जिवन जिउन पाईन ।
उही अभागी तिम्रो
मुटुदेखि मुटुसम्म भाग ५ – प्रेम कहिल्यै अन्त्य हुँदैन
खुशी नै छु तिमीले साथ छोडे पनि
मुटुदेखि मुटुसम्म एपिसोड–२ माया कि ओभर केयर ?